Bhegi rebhegi, Bhegi revadzidzi, Bhegi rechikoroï¼Œ Mabhegi ekufambisa, Vatengesi, China Fekitori dhizaini - Dongguan Zhihao Handbag Viwanda Co, Ltd.
Zvigadzirwa zvinoenderana nePet
Cat anotakura mukwende
Kwevakuru chikafu chemasikati
DongGuan bùxíngzhě Luggage Viwanda Co, Ltd.
Dongguan Zhihao Handbag Viwanda Co, Ltd. yakavambwa muna 2005. Inonyatsotevera indasitiri yekuvandudza maitiro uye makore eakanyanya manejimendi. Iyo yakagadziriswa kuita yakazara bhizinesi inosanganisa R&D, dhizaini, kugadzira uye kutengesa kwemikwende nemabhegi. Imwe yemakambani ekufananidza muindastiri yemitoro. Yakakura kubva pagumi nevaviri pakutanga kwekugadzwa kwayo kune hombe-yakakura kambani yemitoro ine vanopfuura chiuru chevashandi, nzvimbo yekuvaka yeanopfuura mamirioni makumi masere emamirimita, uye goho regore remamirioni matanhatu. .Dongguan Zhihao Handbag Viwanda Co, Ltd. yakagara yakanamatira kumweya wemubatanidzwa we "kutendeka kwakatsiga, shamwari yechokwadi yebhokisi", zvinoenderana nepfungwa yekubatana ye "kubatsirana, kuremekedzwa uye kuvimbika, budiriro uye kuhwina-kuhwina" uye " zvigadzirwa zvakanaka, masevhisi akanaka, vatengi vakanaka, uye kuvimbika "" Zvakanaka "misimboti yebhizinesi, kuenderera mberi kwekuvandudza uye hunyanzvi, zvichitungamira maitiro eindasitiri yemitoro. Iyo kambani yakapfuurawo SGS yepasi rose certificationDongguan Zhihao Handbag Industrial Co, Ltd. yakagara ichinyanya kugadzirwa: mabhegi emabhizinesi, mabhegi emakomputa, mabhegi ekuzorora, mabhegi echiuno, mabhegi, mabhegi ekufambisa, mabhegi ekukwira makomo uye zvimwe zvigadzirwa zvehombodo uye zvinyorwa zvemabhegi, zvimbuzi mabhegi, masutukesi, kukiya pasiwedhi, Masiki eziso, maoko emutsipa, mabutiro ebhokisi, pendende uye mimwe midziyo yemidziyo nemidziyo.
Aya mabhegi emidzi akanaka asina mvura, haakwanise kudzivirira maturusi ako uye kuverengera kukosha kuti zvive nyore, asi zvakare kuchengetedza maturusi ako / zvimwe zvinhu zviome. Izvi zvinonyanya kubatsira kune vemagetsi vanoda Mukadzi Zvekudaidzira mari, vanodzika misasa vanoda kuti nguo dzemazis......
Chiuno homwe, inonziwo chiuno homwe kana chiuno homwe, yambomuka mutsetse kubva kune izvo zvekushandisa Zvokurarama kare kare. Ikozvino chave chisarudzo chinoshanda Chinoshanda, chakajairika semabhegi kana mabhureti mabhegi. Chikonzero chikonzero chikonzero chakanaka chakanaka rinogona:: b b rinogon......
Bhegi rechikoro cheTrolley
Iyo jira rekunze regirazi revadzidzi trolley rakagadzirwa rakagadzirwa neyakareba-density nylon jira Oxford. Ichi chinokosha chine dzimba tensile simba uye abrasionome. Kukwirira kwawo kwemachira uye kupfeka mvura kunodzivirira moto wemvura kunobva pakunyora bhegi. Mukati, musanganiswa uyu une zviri......
Duffle mabhegi evakadzi
Vakadzi chiuno bhegi
Gomo bhasikoro bhegi
3rd Floor, Kwete. 187 Xinyi Road, Jilian Nharaunda, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province
© Copyright 2020-2021 DongGuan bùxíngzhě Luggage Viwanda Co, Ltd.